मधुवन पौडेल - कान्तिपुर समाचार
तीर्थ पनि, श्राद्ध पनि
एक दिन अप्रत्याशित रूपमा मेरा मित्र पूर्व परराष्ट्र सचिव र पूर्व राजदूत डा. मदनकुमार भट्टराईले ‘तपाईंले सबै ज्योतिर्लिंग दर्शन गर्नुभो ? सँगै जाऊँ, म कार्यक्रम बनाउँछु’ भन्दै फोन गर्नुभयो  । घरसल्लाह नभइसकेकाले मैले तत्कालै खास निधो दिन सकिनँ  ।
त्यो घडी अर्थात् परराष्ट्र मन्त्रालयको सेवामा रही लामो समय बिताउनुभएका एक वरिष्ठ व्यक्तित्वको दु:खद अवसान भएको खबर आएको दिन म आफ्नै निजी काममा सहरबाट टाढा पुगेको थिएँ । अकस्मात एकजना सहकर्मी मित्रको फोनबाट यसबारे सुन्दा स्तब्ध हुनु स्वाभाविकै थियो ।
अविनाशलाई दोहा महानगरमा आएको दिनदेखि नै बाँच्न त्यति सजिलो कहाँ भएको हो र ! नयाँ देश, नयाँ सहर, ठूलो ठाउँ, आफूले सोचेभन्दा बेग्लै हावापानी, सबै थोक नयाँ ! उसले यता आउने निर्णय गर्दा कहिल्यै यो ठाउँको जीवन, रहनसहनबारे केही जान्ने इच्छा पनि गरेन !
मधुवन पौडेलका लेखहरु :